कृष्णनगरमा टेण्डरका विषयमा विवाद, आफुमाथि हातपातसम्म भएको कार्यालय प्रमुखको गुनासो « Mayadevi Online News Portal
कृष्णनगरमा टेण्डरका विषयमा विवाद, आफुमाथि हातपातसम्म भएको कार्यालय प्रमुखको गुनासो
प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७६ बिहीबार १७:१४
कृष्णनगर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रराम चौधरीले नगरपालिकाबाट हुने सबै काम बन्द भएको घोषणा गर्नुभएको छ । विहीबार दिउँसो एक विज्ञप्ति निकालेर अधिकृत चौधरीले काम गर्ने वातावरण सहज नभएको र आफुमाथि हातपातसम्म भएको बताउँदै कामकाज ठप्प भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।
कर्मचारीको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको सम्मका लागि कार्यालयका सबै काम अवरुद्ध गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
तर, उहाँको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कसले हातपात गरेको हो खुलाउनुभएको छैन । नगरपालिकामा कार्यालय प्रमुख सरुवा भएपछि निमित्तको जिम्मेवारी पाउनुभएका चौधरीमाथि हातपात गर्ने को हो प्रष्ट छैन ।
यद्यपि विहीबार दिउँसो उहाँ र उपमेयरबीच विवाद भएको बताइएको छ । कार्यालयले हालै निकालेको टेण्डर सूचनाका विषयमा दुई पक्षबीच विवाद भएको हो ।
नगरपालिकाकी उप मेयर शबनम खातुनका प्रतिनिधीले उप मेयरलाई जानकारी नै नदिई एकलौटी रुपमा टेण्डर आह्वान गर्ने, टेण्डर निकाल्ने र भुक्तानी दिएको विषयमा सामान्य विवाद भएको तर हातपात नभएको बताउनुभयो । उप मेयरका प्रतिनिधि समेत रहनुभएका श्रीमान तुफेल खानले नगरमा हालसम्म कुनै विकास निर्माणको काम नै नभएको तर १ करोड भन्दा बढि रकम निकासा दिएको, योजनाका कामहरुको उपमेयरको अनुगमन विना नै निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र इन्जीनियर लगायतको मिलेमतोमा भुक्तानी भैरहेको बताउनुभयो ।
विहिबार खुल्न लागेको वडा नं. ३ र ८ को पोखरी सुन्दरीकारणको टेण्डर र वडा नं. ९ र १० को बाटो निर्माणको टेण्डरका बारेमा पनि उपमेयरलाई कुनै जानकारी किन नदिएको भन्ने विषयमा बुझ्न खोज्दा विवाद भएको बताइएको छ । विवादका कारण विहिबार खुल्नु पर्ने सोही टेण्डर खोलिएको छैन ।
विकास निर्माणका कामको टेण्डर इविल्डीङ्ग र पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकाशन गरी प्रक्रिया पुरा गरी टेण्डर आह्वान गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चन्द्रराम चौधरीले बताउनुभयो । सबै प्रक्रिया पुरा गरी टेण्डर आह्वान गरेको र सोही टेण्डर खोल्ने क्रममा उप मेयरलाई कुनै जानकारी नदिई टेण्डर खोल्न लागेको भन्दै विवादसंगै आफु माथि हातपात भएको चौधरीले बताए । हातपात नै भएपछि प्रहरीलाई बोलाएर सुरक्षित भएको उहाले बताउनुभयो ।
यता नगर प्रमुख रजत शाह विशेष कामले काठमाडौं हुनुहुन्छ । नगर प्रमुख शाखाले आफु कार्यालयमा नभएको तर घटनाबारे जानकारी पाएको बताउनुभएको छ । आफु काठमाडौंबाट आएपछि घटनाको सत्यतथ्य बुझेर दोषीलाई कारबाही गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।